Monday April 23, 2018 - 06:13:52 in Wararka by Super Admin
Dekadda caalamiga magaalada Muqdisho waxaa ku xiran Markab weyn kaas oo daabulaya qalabkii melleteri ee dowladda Imaaraatka Carabta ka yiillay dalka Soomaaliya.
Gaadiid gaashaaman kuwa xamuul ah iyo saanado kale oo dhammaantood ay ku howlgelayeen saraakiisha tababarka melleteri ka bixinayay xerada Gorden ayaa lagu daabulay Markab wali ku xiran dekadda Muqdisho.
Saraakiisha dowladda Turkiga ee gacanta ku haya dekadda caalamiga ah ayaa ogolaaday in dowladda Imaaraatka ay raran karto dhammaan gaadiidka iyo qalabka kayaal magaalada Muqdisho.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in dowladda Imaaraatka ay daabulatay gaadiid nuuca aan xabaddu karin ah oo sanado ka hor ay sheegtay in ay ugu deeqday dowladda Federaalka arrinkaas oo banaanka soo dhigaya in markii hore aysan labada dhinac wax is aaminaad ah ka dhaxeynin.
Xerada Tababarka ee Jeneraal Gorden oo kutaal degmada Hodon ayna gacanta ku heysay dowladda Imaaraatka ayay la wareegtay dowladda Federaalka waxaana sidaas ujarmay xiriirkii u dhaxeeyay Villa Somalia iyo Abu Dhabi.